Ifenitshala Yemilenze Umlenze & Abathengisi | Yongeza
Ikhaya > Iimveliso > Ifanitshala yomlenze
Ifanitshala yefanitshala zizixhobo ezifanelekileyo zefani zokuxhasa ifanitshala, esetyenziswa ngokubanzi kwiitafile, i-Sofa, njl njl. ngenkangeleko entsha.
Umlenze wefanitshala wefenitshala kukukhetha kwakho smart. Isiqinisekiso sethu semilenze yefanitshala ibandakanya iintlobo ezimbini ezahlukeneyo: itafile yomlenze kunye nomlenze wesofa. Sineyona nto ihlukeneyo kunye ne-cein yoncedo, ikunika iintlobo ezahlukeneyo zomlenze wefanitshala kunye nefanitshala yeempawu ezahlukeneyo zokufezekisa iimfuno zakho. Zonke iimveliso zethu ziye zavavanywa kwe-SGS ezingqongqo, kwaye umlenze ngamnye wefanitshala uye wahlolwa ngokungqongqo.
Umlenze wefanitshala wefenitshala unokubonelela ngexabiso lakho elibalulekileyo kunye nomgangatho ophezulu ovumela uvavanyo lomgangatho ophantsi kwaye ulizisa kunye nabathengi bakho abathi bathenga.
I-Addith Bomil yefanitshala iveliswe ngezinto eziphezulu eziphezulu njengezixhobo eziluhlaza, unyango oluhle lomhlaba, lwenza ukuba lube lolutho kwaye luphucule ukukwazi ukuxhathisa i-sprasion yokutshiza ityuwa. Isitayile soyilo sihlukana nesitayile, kwaye sinokusetyenziswa kwizitayile ezahlukeneyo zefanitshala, engaphelelanga sisitayile sokuhonjiswa.
Imibala eyahlukeneyo kunye nobungakanani inokwenziwa ngokwezifiso njengoko ukhetha umthengi, imibala emininzi oza kuyikhetha. Isicelo se-Supine-Schone, silunge ngakumbi ukusetyenziswa kwetafile kakhulu kunye nefenitshala yesofa. Xhasa ukugcwalisa ngokwezifiso ezikhethekileyo, unokuhambelana nomthengi'umbala, ubungakanani bomgangatho wokuvelisa.